Jan 18, 2021 - 08:18 Updated: Jan 21, 2021 - 00:13
Idu obì bụ otu n'ime ihe zuru Igbo ọnụ, ma bụrụkwa oge e ji asị nwata nwoke ''Lee nke a jide" n'ezinaụlọ a mụrụ ya.
Na nkọwa, idu obì pụtara nna ịkpọ ụmụ ya ndị nwoke, keere maọbụ nye onye ọbụla n'ime ha ala ebe ọ ga arụ ụlọ nke ya, maka na a sị na nwata toruo obi ọ pụọ obì. Ndị mba ọzọ dị iche iche na agbụrụ ụfọdụ na-emekwa omenala idu obì n'ụdị nke ha n'ihi na ama onye na-adị ka o siri chọọ ya.
N'ala Igbo, idu obi abụghị naanị omenala, kama ọ bụkwa ihe ziri ezi, n'ihi na a sị na ihe onye ruru ogo ya wee rie ya, ọ bụghị akpịrị. Ọ bụ kwa ihe a ma ama na ọ bụrụ na ịkpọ ngwere emeghị ihe o jiri bụrụ ịkpọ ngwere, ụmụaka ewere ya mere anụ n'ọkọchị na n'udummiri. Nke a mere na ndị Igbo ejighị idu obi egwu egwu, ọ kachasị n'oge gboo, maka na ha ghọtara na ọ bụrụ na nwoke edozighị ngwuru be ya n'oge, nsogbu ụwa edulaa ya mmụọ.
N'oge gboo n'ala Igbo, nwoke ọbụla lụrụ nwaanyị na-ebu ụzọ gbàkọcháá ala ya na ihe o nwere, tupu o mara etu ya na nwunye ya ga-esi debe ọkpà wee gba egwu n'elu àkwà, maka na onye ọbụla na-amabiri ụtara ka oghere akpịrị ya ha. Onye loo nke karịrị ya, ọ gbàgbughị ya agbàgbu, ọ fụchie ya ikè.
Ya bụ na n'oge gboo, nwoke ọbụla na-ebu ụzọ pịakọọ ma were uche gbakọọ okè ala ya na ihe o nwere, tupu o kpebie ụmụ ole ọ ga-amụ, ka o wee nwe ike inye onye ọbụla ihe ruuru ya, n'ihi na ha ghọtara onye riri amụ ebule ji íbì ụgwọ. Ya mere onye ọbụla ji ejikọlo onwe ya, ma mụrụ ole ọ ga-azụnwu.
Nna nwe ezinaụlọ ga-akpọzie ụmụnna òkù, maọbụkwa kpọọ naanị mmadụ olenaole n'ime ha, tinyere ụfọdụ ndị nwadiala, ndị nnaochie na ndị ọzọ ga-anọ dịka ndị akaebe n'ihe gbasara idu obi maọbụ ikè ihe ahụ. Ọ ga-eweta wetá óké mmanya, ọjị, ose akpị, maọbụ sie nri, dịka aka ya ha, maọbụ dịka otu ha siri wee kwadote. Ụfọdụ ndị aka siri ike na-egbu ewu, ma kwado oriri pụrụ iche ụbọchị ahụ, n'ihi na ala obi bụ ọnụ okwu nwoke nwere be nna ya. Ọ pụtaghị na ya bụ ala ana-ebùkazị oke ibu; kama, o nwere oke ọñụ na-eso ya abịa, tinyekwuoro na ọ bụ ihe nketa kachasị ukwu nwoke na-enweta n'aka nna ya dịka nwoke.
Mana ọ dịkwa mma ime ka a mara na a ga-ebu ụzọ mee ọtụtụ omenala ndị ọzọ dị iche iche n'isi nwaanyị ahụ, tupuu a sị na ọ bụrụla onye a hara àhà, maka na e sighị n'ọdụ agbọ akwụ; e sighịkwa n'elu aghọrọ mmiri ọkụ.
Na nkọwa doro anya, inye mmadụ ala obi abụghị ikè ihe n'uju, kama ọ bụ nna igosi ụmụ ya ndị nwoke ala ebe ha ga-arụ ụlọ. Mana otu ọ dị, ụfọdụ na-emekọta ihe niile ahụ otu ụbọchị, ọ kachasị n'ebe e nwere nsogbu, ebe a na-acha nwoke ọkụ, maọbụ ebe nna nọrọgoro nso n'ala ili ya; ka ọ ga-abụ onye chọọ ịnwụ, ọ nwụọrọ onwe ya n'obi òfò.
Mbize: Gọọmenti Etiti Ekwe Nkwà Ịgbatara Anambra Ọsọ Enyemaka